Home BOGGA HORE Ma ogtahay Madaxweyne?
Mudane Madaxweyne , Ma ogtahay mise laguu sheegay in magaalada Muqdisho kumannaan caruur ah iyo waalidiintoodii ay baahi lajiifaan, ilmaduna ka qubaneyso? Xataa waxaa laweysan yahay cid u qaylo dhaamisa, sababtuna waxay tahay NGO-yadii magaca masaakiinta ku qaraaban jirey oo haatan helay magac kale oo lagu qaraabto oo layiraahdo New Deal. Waxaa kale oo jira kuwii magaca bulshada rayidka ku hadli jirey oo markey siyaasiyiin noqdeen iska aamusay, qaar kalena ay cabsi la argagaxsan yihiin.
Mudane, Ma lasocotaa Sicir bararka ka jira magaalada Muqdisho oo miskiin koriso ahaan jirtey in uu Muqdisho ka dhigay Miskiin buriso ? waxaa Muqdisho lagu tilmaamaa haatan in ay ka mid noqotay magaalooyinka Afrika ugu qaalisan.
Ustaadoow Ma ogtahay in magaalada Muqdisho uu ka socdo boob la boobayo dhulkii dowladdu lahayd oo ay boobayaan Ganacsato iyo Mas’uulin aad adigu wareegto ku magacowday?
Madaxweyne, ma qiyaasi kartaa baaxadda uu gaarsiisan yahay argagaxa , cabsida , xorriyad la’aanta iyo caddaalad darrida ka jirta Muqdisho; Caasimaddii Soomaaliya? Dhibbane kasta adiga ayuu ku soo eegayaa maxaa yeelay amaanadii cirka iyo dhulku diideen adiga ayaa doontay, una dhaaratay, xisaabteeda adduun iyo aakhirana adiga ayay kuu taallaa. Dhibbane Madaxweyne Allaha kuu fududeeyo gudashada ammaanadaasi.
Previous articleShirka Gobollada Dhexe oo Ka Furmaya Cadaado
Next articleWasiirka Cafimaadka oo Gaartay Magaalada Jowhar